Choputa tattoos na-aga n'ihu nke Mo Ganji, onye omenkà izizi | Igbu egbugbu
Susana Garcia | | Ndị na-ese egbugbu, Ogbugbu
O yiri ka a na-eme ihe niile banyere egbugbu, anyị ahụwokwa ụdị na ụdị echiche dị iche iche. O siri ike ịchọta mmetụ mbụ na nke pụrụ iche na ụwa nke egbugbu, ebe ọ bụ na a chọpụtala ụdị niile dị ebe ahụ. Agbanyeghị, site n'oge ruo n'oge onye na-ese ihe na-abịa ma na-apụta ìhè karịa ndị ọzọ site na ọrụ ya yana nke ya na nkọwapụta nke na-eduga ya na ama, dị ka Emee site na egbugbu Mo Ganji.
N'agbanyeghị aha ya, anyị na-emeso onye Berliner nke ghọrọ onye ama ama ama ama see ihe osise ndi sitere n'ike ike. Site na otu akara nke anaghị agbaji, enwere ike ịmepụta ụdị eserese na echiche niile. Echiche a bụ ihe ịtụnanya na ọ nwere ike iyi ihe siri ike ị nweta, mana mgbe anyị hụrụ atụmatụ ya anyị na-amata na ọ bụ onye na-ese ihe nwere ike ịmepụta ihe ọ bụla ụdị eserese na echiche a.
1 Kpụrụ siri ike na-egbu egbu egbugbu
2 Ihu egbugbu
3 Igbu egbugbu na onu ogugu
4 Ogbugbu na ihe ndi ozo
5 Tattoodị akara anụmanụ
6 Etu enyí nwere eriri ndị siri ike
Kpụrụ siri ike na-egbu egbu egbugbu
El nkịta ọhịa bụ anụ ọhịa ejirila ọtụtụ egbugbu maka nnukwu akara. Anụ ọhịa wolf bụ nke ngwungwu ma dịrị ndụ na ya, na-egosipụta iwe na ntụkwasị obi. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ anụmanụ na-ekwesị ntụkwasị obi nye nke ya ma na-egosi obi ike ya. Onye na-ese ihe enweela ike ijide anụ ọhịa wolf na nkọwa ya niile site na iji eriri ahụ na-aga n'ihu na-aga n'ihu. Ọnwụ ya na-apụta n'ihi na ọ na-eji naanị akara na-adịghị agbaji n'oge ọ bụla. Emere ya na akara ojii di nkọ. Ekwesịrị ikwu na na eserese gị, akara ndị ahụ na-adịwanye ma ọ bụ na-erughị ala dabere na ọrịa strok ịchọrọ igosipụta iji nyekwuo nghọta na eserese ya. Na nkịta ọhịa anyị nwere ike ịhụ otu mputa, anya na ube.
na ihu ndị mmadụ bụ egbugbu ọzọ nke onye nka nka di nma nke-uku. Anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ nnọchi anya nke na-apụ n'eziokwu iji gaa na nchịkwa, yana ọnụ ọgụgụ ndị jikọtara ahịrị. Echiche ahụ ka dị ịtụnanya n'ihi ikike ịmepụta ihe osise niile na otu akara. Anyị na-ahụ ihu nwanyị n'egbugbere ọnụ ya ma ọ bụ ihu abụọ agwakọtara n'ime nke ejiri usoro a. Ọ na-achọ nnukwu ihe dị iche iche nke okike na karịa ihe niile iji dị mma na ịbịaru iji wepụta ibe ọ bụla.
Igbu egbugbu na onu ogugu
Nke a bụ otu n'ime gị tattoos dị mfe, nke anyị na-ahụ silhouette nke nwanyị si n'azụ. Na egbugbu ndị a, a na-ejikwa obere ntụpọ mgbe ụfọdụ dị ka shading iji nye ya mmetụ. Ha bụ egbugbu mara mma nke na-adọta uche maka ịnwe ọdịdị mmiri ahụ.
Ogbugbu na ihe ndi ozo
Ndị a oyi tattoos sitere n'ike mmụọ nsọ ihe site n'okike. N'otu aka anyị nwere painiapulu e kere ya na usoro ndị ahụ na-aga n'ihu na-egosipụta mpaghara dị n'èzí na ahịrị ndị toro eto. N'aka nke ọzọ, anyị na-ahụ ịchọpụta siri ike, nke bụ protagonist na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke egbugbu na anyị ahụlarị ya ka ọ nọchitere anya n'ụdị niile, belụsọ na akara a na-aga n'ihu. Ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ n'ụzọ na-adọrọ mmasị ị ga-eyi akara a nke nwanyị na ịma mma ya.
Tattoodị akara anụmanụ
na egbugbu anụmanụ Ha abụghịkwa ihe mbụ, ebe ha nọrọ kemgbe ọtụtụ afọ. Ha niile na-ese onyinyo ihe, yabụ anyị na-ezutekarị anụmanụ dị iche iche. Ebumnuche na-abatakarị n'ụzọ nke ịnọchite ha. Ka ọ dị ugbu a, egbugbu anụmanụ ndị e kere n'ụdị geometric dị ezigbo mma, mana egbugbu ndị a na-aga n'ihu n'ihu. Dịka ị pụrụ ịhụ, akara ndị a nwekwara akara iji tinye ihe mkpuchi ụfọdụ nwere uche. Ma esere onwe ya na ahịrị, nke mere ya ji bụrụ ihe pụrụ iche.
Etu enyí nwere eriri ndị siri ike
Anyị na-aga na egbugbu nke enyí, nke e kere na ọtụtụ ahịrị. Elephane na-egosipụta amamihe, yabụ onye ji ya chọọ ịnọchite anya agwa a. Kedu ihe ị chere maka akara egbugbu ndị a na-aga n'ihu?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Igbu egbugbu » Ogbugbu » Na-aga n'ihu Mo Ganji tattoos
Inweta mkpịsị egbugbu egbugbu: sayensị n'azụ omume ahụ